တစ်ကိုယ်တည်းသမားတို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာ - For Her Myanmar
January 12, 2018 by Khine
ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလေးတွေက ချစ်သူမရှိတဲ့ FA လန်းလန်းလေးတွေ အတွက်ပဲနော်။
ယောင်းတို့ရေ အက်ဒမင်က ချစ်သူကိုချွဲဖို့ အင်္ဂလိပ်စကားလေးတွေနဲ့၊ ချစ်သူနဲ့ဝေးနေချိန်ဖီးဖို့ အင်္ဂလိပ်စကားလေးတွေ ပြောပြပေးပြီးပြီနော်။ ဆိုတော့ကာ ဒီတစ်ခါ အလှည့်ကျလာသူလေးတွေကတော့ FA ယောင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း)
လာလာစကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ကို FA ယောင်းယောင်းတို့ ခပ်ချေချေ ပြန်ပြောလို့ရမယ့် နှုတ်လှန်ထိုးနည်းလေးတွေ သင်ပေးမယ်နော်။ RS တွေအတွက်ချည်း ရေးနေတယ်ဆိုပြီး အက်ဒမင့်ကို စိတ်မကောက်ကြေး။
Related article >>> အင်္ဂလိပ်လို ချစ်ခွန်းခြွေနည်းများ
Single and fabulous. ငါကအပျိုကြီးပေမယ့် အလန်းဇယား။
ဒီစာကြောင်းလေးကတော့ ရှင်းပါတယ်။ I am single and I am fabulous လို့ပြောတာနဲ့ တူတူပါပဲ။ Fabulous ဆိုတာ လှတယ်ဆိုတာထက် ကျော့ကျော့လန်းလန်းခပ်မိုက်မိုက်လို့ ပြန်ရင်ပိုမှန်မယ်။ ဒါကြောင့် ခပ်တည်တည်နဲ့ နင်တို့လို ရည်းစားတွဲလောင်း မဟုတ်ဘဲ လန်းနေတာမြင်ပလားဆိုပြီး ဆံပင်လေးခါရင်း ဒီလိုပြောလိုက်စမ်းပါ။
I’m only single because I’m too pretty for anyone else. ငါ့အလှနဲ့ဘယ်သူမှမတန်လို့ အပျိုကြီးဖြစ်နေတာဟေ့။
I’m only single ဆိုတဲ့အထဲက only ဆိုတဲ့စာလုံးက ငါအပျိုကြီးဖြစ်နေရတာ အနောက်ကအကြောင်း တစ်ခုတည်းကြောင့်လို့ ပြောချင်တာပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းက ဘာလဲဆိုတော့ I’m too pretty အရမ်းလှနေလို့။ ဘယ်သူ့အတွက်လဲဆိုတော့ anyone else တခြားသူတွေ အားလုံးအတွက်။ Too ဆိုတာက အရမ်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပေမယ့် very တို့ so တို့လို အပြုသဘော မဆောင်ပါဘူး။ အငြင်းသဘောဆောင်တာပါ ဒီမှာဆိုလဲ ငါကလှလွန်းလို့ ဘယ်သူနဲ့မှ မတန်ဘူးလို့ သကောင့်သားတွေအားလုံးကို ငြင်းပစ်လိုက်တာပါ။
I’m single by choice. မလိုချင်လို့အပျိုကြီးလုပ်နေတာ။
ဒါလဲရှင်းပါတယ်။ I’m single ငါအပျိုကြီးပါ၊ by choice ငါ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ငါပေါ့။ ကြိုက်မယ့်လူမရှိလို့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ အပျိုကြီးလုပ်နေတာ။ ရည်းစားများလိုချင် ခေါင်းခေါက်ရွေးလို့ရတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
Being alone does not mean I’m lonely. တစ်ယောက်တည်းပျော်လွန်းလို့။
တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေပေမယ့် အထီးကျန်မနေပါဘူးလို့ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လို့ ရပါတယ်။ ရည်းစားမရှိပေမယ့် မိသားစုရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။ ဘယ်သူမှမရှိတောင် စာအုပ်တွေဖတ်၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်၊ သီချင်းနားထောင်နဲ့ ရည်းစားမရှိလို့ အထီးကျန်ဖို့အချိန်တောင် မရှိပါဘူးပေါ့။
I’m inarelationship with food. အစားသာစားနေရရင် ရည်းစားမလိုဘူး။
ဒါကတော့ အစားတစ်လိုင်း ယောင်းတို့ပြောလို့ရတဲ့ စကားလေးပေါ့။ Inarelationship ဆိုတာ ပတ်သတ်ဆက်ဆံရေးပါ။ I’m in relationship with him ဆိုရင် ဒီကောင်လေးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်နေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ တိုက်ရိုက်ပြန်ရရင် အစားအသောက်နဲ့ ရည်းစားဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ အစားအသောက်သာရှိရင် ဘယ်သူမှထပ်မလိုဘူးပေါ့ကွယ်။ ခရီးသွားတာ ကြိုက်တဲ့ယောင်းတို့ကတော့ I’m inarelationship with travel လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
I’m not single, I’m in relationship with fun and freedom. ရည်းစားမရှိတာ မဟုတ်ဘူး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ချင်လို့ ထားကိုမထားတာ။
ဒါလဲ အပေါ်ကဟာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ လွတ်လပ်မှုတို့နဲ့ ရည်းစားဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ လူကိုရည်းစားထားရင် မလွတ်လပ်ဘူးလေ။ ဟိုဟာမဝတ်နဲ့၊ ဟိုလူနဲ့မပေါင်းနဲ့၊ ဟိုနေရာမသွားနဲ့၊ ညဆိုစောစောပြန်၊ အို… ချုပ်ချယ်မှုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု မပြီးနိုင်ဘူး။ ရည်းစားမရှိတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲပေါ့။ သွားချင်တဲ့ဆီသွား၊ စားချင်တာစား အေးဆေးပဲ။
I’m single because I’m born that way. မွေးကတည်းက တစ်ယောက်ထဲ မွေးလာတာလေ။
Born that way ဆိုတာ ငါကမွေးကတည်းက ဒီလိုပဲလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ရည်းစားထားတဲ့ ကိစ္စမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အမူအကျင့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က အနုတ်သဘော ဝေဖန်လာခဲ့ရင် မွေးကတည်းက ဒီတိုင်းပဲလို့ ပြန်ပက်ချင်ရင်လဲ I’m born that way (or) I’m born this way လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ခုလဲ ရည်းစားကဘာလုပ်မှာလဲ မွေးကတည်းက တစ်ယောက်ထဲပဲလို့ ပြောတာပါ။
Related article >>> အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာ ရှက်မနေပါနဲ့
ကဲ ကိုကို့ကိုချွဲဖို့ တင်ပေးကတည်းက single ယောင်းတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ တွေ့ရလို့ အခုတော့ single ကလေးတွေအတွက် ရေးပေးလိုက်ပါပြီနော်။ ရည်းစားမရှိတာ ဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း ဘဝကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြတ်သန်းနိုင်တာမို့ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပါ။ နောက်ပြီး တစ်ခါတစ်ခါ စကားပြောစရာလူမရှိ ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လဲ For Her အက်ဒမင်မမတို့ကို စကားလာပြောပေါ့နော်။ အက်ဒမင်တို့က ယောင်းတို့ကို အမြဲကြိုဆိုလျက်ပါ။
ဓာတ်လိုက်ခံရတဲ့အခါ သတိထားသင့်တဲ့ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်လေးများ
“အားနွဲ့တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနည်းတာပဲ ရှိပါတယ်” လို့ဆိုလာတဲ့ မခင်ချမ်းမြေ့သူ